युट्युबरकाे इजलास, ठाउँकाे ठाउँ फैसला
Exclusive जापान लान्छु भन्दै लाखौँ असुल्ने कमला पक्राउ, पत्रकारमाथि पटक–पटक हातपात, खुलेआम दादागिरी । यो शीर्षकको एउटा भिडियो अहिले युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर दुईमा छ । पाँच दिनअघि अपलोड भएको ३६ मिनेटको भिडियोले ‘ट्रेन्डिङ वान’को २ घण्टा १७ मिनेट लामो चलचित्र ‘मारुनी’लाई पछ्याइरहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै पटक हेरिएका भिडियोहरू ट्रेन्डिङमा आउँछन् । यो स्टोरी तयार पार्दासम्म ‘जापानवाला’ भिडियोले ७ लाख सात हजार भ्युज पाइसकेकाे छ । त्योभन्दा माथि रहेको मारुनी २८ लाख पटक हेरिएको छ ।
दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘डेस्ट्रोयर‘लाई तल पारेर दौडिरहेको यो भिडियो प्ले गरेपछि हाइलाइट मात्र हेरेर हत्तपत्त एक्जिट हुन मनले मान्दैन ।
युट्युब ट्रेन्डले अहिले मूलधार वा व्यावसायिक भनिएका मिडियालाई नै छक्क पारेको छ । समाज, समुदायका सरोकारमाथि मूलधारका मिडिया केन्द्रित हुन्छन् । नीतिगत सुधारका लागि खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । शानदार स्टुडियोमा वरिपरि तीन/चार वटा क्यामेरा राखेर बहस चलाउँछन् । व्यापक खोजी गरेर ‘न्युज स्टोरी’हरू तयार गर्छन् । तर, तिनका अक्सर सामग्रीले त्यति पाठक शायदै पाउलान्, जति युट्युबमा एउटै क्यामेराले खिचेर तयार गरिएका ‘जापानवाला’जस्ता भिडियोले पाउँछन् ।
चार दिनअघि लुकी लुकी अंगालो हालेको सबलाई थाहा भयो, रिया खड्का र भाइरल सुजन बाबु प्रेम सम्बन्धमा यसरी परे शीर्षकमा अपलोड भएको भिडियो युट्युबको पाँच नम्बर ट्रेन्डिङमा छ । कञ्चन र अनिसाको प्रेमको अन्त्य कसरी भयो ? कन्चन र अनिसाको घरमै पुगेर हेर्दा यस्तो देखियो शीर्षकको अर्को ‘लभ स्टोरी’ले रिया र सुजनको भिडियोलाई चुनौती दिइरहेको छ । युट्युबमा धेरैपछि ‘हेर्ने कथा’ ट्रेन्डिङमा परेको छ, जुन निकै मिहेनत र खर्चपछि निर्माण गर्ने गरिएको छ ।
बिछोडिएका ‘लाहुरे र लाहुरेनी’लाई युट्युबरले मिलाइदिएको भिडियोले यसअघि दुई साता युट्युब ट्रेन्डिङ कब्जा गरेको थियो ।
जे होस्, अघाेरी बाबा र प्रतिभा, बखत मिलनबिछाेडका भिडियोले नै युट्युबको ट्रेन्डिङ सेक्सन कब्जा गर्ने गरेका छन् ।
यसमा जानुअघि ट्रेन्डिङ २ को भिडियोमा त्यस्तो के छ, जसले अक्सर हाइलाइट हेरेरै बाहिरिने दर्शकलाई ३६ मिनेटसम्म टिकाउँछ ? यसबारे चर्चा गराैँ ।
यो भिडियो ‘गूड टिभी’ नामको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ, जहाँ आफूलाई पत्रकार बताउने गंगा लामाले उनकै भाषामा ‘स्टिङ अपरेसन’ गरेकी छन् । जापान पठाइदिने भन्दै पैसा असुलेको आरोप लागेकी कमला भण्डारीलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित उनको कुखुरा फार्मबाट थानकोट प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्‍याएको दृश्य भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
गंगाको दाबीअनुसार कमलाले धेरैजनालाई ठगेको प्रमाण उनीसित छ । र, उजुरी दिँदा पनि प्रहरीले पक्राउ नगरेकाले पीडितलाई आफूले सहयोग गरेको गंगाले भिडियोमा बताएकी छन् ।
भिडियोको शीर्षक जति आक्रामक छ, त्योभन्दा ज्यादा आक्रामक यसको दृश्य छ । बाझाबाझ मात्रै होइन, भिडियोमा पीडक भनिएको पक्ष, पीडित र युट्युबरबीच लघारालघारसमेत भएको देख्न सकिन्छ । यस क्रममा ठगीको आरोप लागेकी कमलाले अश्लील शब्द बाेलेर गालीगलौजसमेत गरेकी छन् ।
कमला बसेको ठाउँमै पीडित र युट्युबर गंगा पुग्छन् । सुरुमा कमला शान्त रूपमै प्रस्तुत हुन्छिन् । गंगाले अप्ठ्यारो र कडा प्रश्न गर्न थालेपछि उनी जंगिन थाल्छिन् । पीडित पक्षले आफ्नो चार लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न माग गर्छ । तर, कमला पछि काम हुने र अहिले पैसा फिर्ता नगर्ने बताउँछिन् ।
खासमा जापान पठाइदिने भनेर कमलाले एक अर्धबैँसे महिलासँग डेढ वर्षअघि चार लाख लिएकी थिइन् । यति मात्र होइन, आफ्ना केही आफन्त जापानमा ठूलै पदमा रहेको भन्दै उनले थुप्रैबाट पैसा असुलेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
कमलाले दिएको फर्जी कागजात बोकेर पीडित र युट्युबर गंगा त्यहाँ पुगेका हुन्छन् । पीडितका अनुसार पैसा फिर्ता माग्दा कमलाका तर्फबाट धाकधम्कीसमेत आउने गरेको थियो । त्यहाँ निकैबेर वादविवाद हुन्छ । अन्ततः कमला प्रहरीकहाँ जान तयार हुन्छिन् । उनीहरू त्यो कुखुरा फार्मबाट भनाभन गर्दै थानकोटतिर निस्किन्छन् । जाने क्रममा कमलाले क्यामेरा खोस्न खोज्छिन् । उनलाई प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएपछि गंगाले पीडित भनिएकी महिलाको प्रतिक्रिया लिन्छिन्, जहाँ ती महिला गंगालाई धन्यवाद भन्दै भक्कानिन्छिन् । ‘मैले न्याय पाउने आस मारिसकेकी थिएँ’, भावुक हुँदै ती महिलाले भन्छिन् । अर्का एक पीडित युवाले आफ्नो पैसा खाइदिने कमलालाई पक्राएपछि न्यायको आस पलाएको बताउँछन् ।
यो भिडियोपछि आफूलाई कमला पक्षले धाकधम्की दिएको भन्दै गंगाले समेत प्रहरीमा उजुरी दिएको अर्को भिडियोमा बताएकी छन् ।
कमलाबाट कति जना ठगिए यकिन छैन । तर, उनी ठगी मुद्दा खेपिरहेकी महिला हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दहालका अनुसार उनलाई गत मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले ‘हाजिरी जमानी’मा छोडेको छ ।
अक्सर साझा सराेकारका विषयवस्तुमा पात्रबाट उठाइएका भिडियाे/न्युज स्टाेरीले दर्शक/पाठकको ध्यान खिच्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ, चाहे युट्युब, अखबार, अनलाइन नै किन नहुन् । मिडिया संस्थाहरू बढ्दाे क्रममा रहे पनि ती मात्रै अब माध्यम रहेनन् । हिजाेआज अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारितामा सिटिजन जर्नलिज्म भन्ने शब्दावली चर्चामा छ । अर्थात्, हरेक नागरिक समाचारकाे स्राेत मात्रै नभई प्रसारण, प्रकाशनकाे माध्यमसमेत बन्न गएकाे छ ।
गंगालाई नै हेराैँ न । उनले एउटा पात्र हुँदै वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका युवाको पीडा भिडियोमार्फत बोलेकी छन् । तर, खासगरी युट्युबमा प्रायसः यस्ता भिडियो बढी ट्रेन्डिङमा देखिन्छन्, जुन व्यक्तिका नितान्त निजी विषयमा केन्द्रित हुन्छन् । ‘अघोरी बाबा’को कुटीगाथादेखि प्रतिभा र बखत, रिया र सुजन, कञ्चन र अनिसाको प्रेमबिछोडसम्मका भिडियोले विषम राजनीतिमा देशका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तासम्मलाई छायामा पारिदिएका छन् । यदाकदा केही विश्लेषकलाई देख्न पाइन्छ, नरम र शालीन प्रस्तुतिले दर्शकको ध्यान खिच्न नसकेपछि कडा र गालीगलौजका शब्द प्रयोगपछि ‘भाइरल’ बनेका छन् ।
युट्युबको यस्तो ट्रेन्डले केको संकेत गर्छ ?
पत्रकार कुन्दन अर्याल अहिले नेपालको युट्युब ट्रेन्डलाई अमेरिकी अभिनेत्री मेघन मार्कलले ११ वर्षको हुँदा गरेको एउटा गुनासोको प्रसंगसँग जोडेर व्याख्या गर्छन् । टिभीमा मेघनले भाँडा धुने झोल साबुनको विज्ञापन देखिन् । विज्ञापनमा भनिएको थियो, ‘अमेरिकाभरिका महिला चिल्लो भाँडासँग संघर्ष गरिरहेका छन् ।’
विज्ञापनको आशय र त्यसमा प्रयोग गरिएका शब्दले उनलाई चोट पुर्‍यायो । र, उनले त्यस बेलाकी प्रथम महिला हिलारी क्लिन्टन, टीभी कार्यक्रम सञ्चालिका र त्यो साबुन उद्योगको मुख्य मालिकलाई पत्र पठाइन् । केही दिनपछि त्यो साबुन कम्पनीले आफ्नो विज्ञापन सच्यायो । महिलाको ठाउँमा मानिस बनाइयो र विज्ञापनलाई ‘अमेरिकाभरका मानिस चिल्ला भाँडासँग संघर्ष गरिरहेका छन्’ बनाइयो ।
मेघन अहिले ३९ वर्षकी भइन् । अर्याल भन्छन्, ‘२८ वर्षअघि ११ वर्षकी बच्चीले यस्तो सोच्नु, विभेद पहिचान गर्नु र यसको निराकरणका लागि अघि सर्नुले त्यो बेलाको समाजको चेतनास्तर उजागर गर्छ । हाम्रो समाज अझै त्यो स्तरमा पुग्न सकेको छैन ।’
अहिले युट्युबमा कसैका व्यक्तिगत झगडाबारे बनाइएका भिडियो बढी हेरिनु र नीतिगत विषयमाथिका सामग्रीले दर्शक तान्न नसक्नु समाजको चेतनासँग जोडिएको विषय भएको अर्यालको भनाइ छ । ‘तर, सामाजिक रुपान्तरणको जिम्मेवारी त मिडियाको पनि हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा भूमिका खेल्नुपर्छ, यस्ता व्यक्तिकेन्द्रित सामग्रीबाट नीतिगत र साझा सरोकारका विषयमा पाठक/दर्शकको ध्यानाकर्षण गर्न सक्नुपर्छ ।’
यद्यपि, पत्रकारिताका मापदण्डअनुसार तयार गरिएका समाग्री बढी हेरिएनन्, पढिएनन् भनेर अतिवादी धारमा जान नहुने उनको सुझाव छ । ‘सय वर्षयता पत्रकारिताका सिद्धान्त छन्, मूल्यमान्यता छन्’, उनी भन्छन्, ‘तथ्य संकलन गरिन्छ, परिमार्जन हुन्छ, सम्पादन अनि प्रकाशन/प्रसारण गरिन्छ । र, छापिएका हरेक कुरा समाजका लागि हुन्छन् । कम हेरिए वा पढिए भनेर कसैले मूल्य बिर्सनु हुँदैन ।’
प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की युट्युब ट्रेन्डलाई राज्य संयन्त्रका जवाफदेहीशून्य कार्यशैलीसँग जोड्छन् । ‘नागरिक आफ्नो समस्याको समाधान छिटो चाहन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘राज्य संयन्त्रले आलटाल गरिदिन्छन्, त्यसैले आज धेरै मानिसलाई लाग्छ– युट्युबमा बोल्यो भने मेरो समस्या समाधान हुन्छ ।’
कार्कीले भनेजस्तै गंगा लामाको भिडियोमा देखिएकी पीडित महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिए पनि कमला पक्राउ परेकी थिइनन् । युट्युबर गंगाको पहलमा उनले कमलालाई पक्राउन सफल भइन् ।
‘व्यावसायिक मिडियामा गुनासो लिएर गयो भने उनीहरू तथ्य खोज्छन्, त्यसको जाँच गर्छन्, दुवै पक्षको कुरा बुझेपछि समाचार बन्ने विषय हो कि होइन निर्क्यौल गरेर निर्णय लिन्छन्’, कार्की भन्छन्, ‘तर, युट्युबमा आज गयो भने आजै वा भोलिपल्टसम्म आफ्ना समस्या देखाउन पाइन्छ भन्ने परेको छ धेरै मानिसलाई ।’
युट्युबमा समाचार नबन्ने विषयलाई सनसनीपूर्ण शीर्षक राखेर भिडियो बनाउने, कसैको व्यक्तिगत जीवन, गोपनीयता ध्वस्त पारिदिने प्रवृत्ति भने चिन्ताको विषय भएको उनी ठान्छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ५, २०७७, १४:०२:००